Pterostilbene Powder Inobatsirika seNootropics Uye Anti-Kusakara Supplements Shangke Chemical
Pterostilbene Powder Inobatsirwa seNootropics Uye Anti-Kuchembera Supplements
1. Chii chinonzi Pterostilbene?
Pterostilbene yakakosha kemikari yakasikwa panguva yehupenyu hwezvimwe zvirimwa senzira yekurwisa hutachiona. Komputa iyi yakafanana neimwe yakaunzi sereveratrol uye inowanikwa nyore nyore mune fomu yekuwedzera. Pterostilbene inowedzera inonyanya kuve bioavava. Izvi zvinoreva kuti dzinogona kunyudzwa mumuviri nyore uye nekukurumidza uye hadzina kusvibiswa mukati mekuchera. Pterostilbene poda zvakare inoshanda, asi hafu-hupenyu hwayo hupfupi sezvo iri pasi pemaminitsi zana.
Pterostilbene chikafu zvinyorwa
Pterostilbene zvekudya zvinosanganisira blueberries, maalmond, cranberry, mulberry, nzungu, waini tsvuku, mazondo matsvuku, mashizha emazambiringa, Indian ichi muti bark, Red sandalwood, uye cocoa. Blueberries iri, zvakadaro, yakanyanya yepamusoro yePterostilbene chikafu sosi, asi huwandu hwayo Blueberries huripo mudiki kana uchienzaniswa nePterostilbene supplements. Pterostilbene blueberries yezvinyorwa inofungidzirwa kunge yakapoteredza 99 kusvika 52 nanograms, mune yega yega yegraebherries.
2.Pterostilbene mashandiro ekuita
Pterostilbene mashandiro ezviito akasiyana neayo eresveratrol. Pterostilbene denderedzwa ndiyo inonyanya kushandisa stilbene. Iyo akasiyana Pterostilbene pundu pundutso inoenderana neimwe mushini wekuita futi. Iyo pharmacological chiito che trans-pterostilbene inosanganisira antineoplastic, antioxidant, uye anti-immune.
Pterostilbene inoratidza inoshanda antifungal zviitiko iyo ine gumi kakapetwa kaviri kupfuura resveratrol. Pterostilbene poda zvakare inoratidza antiviral mhedzisiro. Kudzivirirwa kwezvirimwa kubva kumatapiki akati wandei zvinoita senzira yakakosha ye stilbenes, kusanganisira Pterostilbene, uye zviitwa izvi zvinowedzera kumhuka nevanhu zvakare.
Pterostilbene inoratidzawo anticancer mhedzisiro kuburikidza akati wandei mamolekisheni. Tsvagiridzo inoratidza zviitwa zvePterostilbene zvinosanganisira tumor suppressor genes, modelling yesign transduction nzira, oncogeneas, masiyano masero genes, uye cell kutenderera inodzora genes.
Antioxidative zvivakwa zvePterostilbene zvakasiyana chaizvo neizvo zveververatrol. Mune resveratrol, matatu matatu hydroxyl mapoka anoregedza ROS (inoshanda mweya oksijeni marudzi) mune akaparadzika lymphoblasts uye neropa rese nepo Pterostilbene, ine 1 hydroxyl boka uye 2 methoxy mapoka anoderedza extracellular ROS. Kugadziriswa kwema antioxidation zvimiro zvinogonesa kushandiswa kwePterostilbene poda kunongedza extracellular reactive oksijeni marudzi, ayo anokonzeresa kukuvara kwematinji panguva isingaperi kuzvimba.
Pazasi pane mamwe pterostilbene masisitimu ezviito akakurukurwa zvakadzama;
Pterostilbene mashandiro ekuita; Sirtuin Activation
Pterostilbene inomutsa SIRT1 siginecha nzira mumaseru inopa kudzivirira kubva mukukuvara kwema cellular, nekudaro kuishandisa. Iyi nzira inowedzera p53 expression. P53 ipuroteni inodzivirira iyo DNA kubva mukukuvadzwa uye inochengetedza maseru kubva kune yakashandurwa inogona kukonzera kenza.
SIRT1 inogona kukudzivirira kubva mukukuvadzwa uye kuora kwemasero, ayo anokura sezvaunokura.
Ongororo dzinoverengeka dzakaratidza kuti pterostilbene kemikari yakamisikidza lowers kuzvidzora uko kunodzorwa neTNF-alpha (tumor necrosis factor-alpha). Kushungurudzika kweOxidative kunounza kuzvimba; Pterostilbene anovharira interleukin-1b uye TNF-alpha nekuderedza reactive mweya yemarudzi.
Iyi pombi inodzivirirawo kubva kune kusagadzikana mukati mechikamu chemaserura inozivikanwa seiyo ER (endoplasmic reticulum). Mune kutsvagurudza, pakamhara masero emidzi yeropa akafumurwa kuPterostilbene poda, kumhara kwavo hakuna kupindura kuzviratidzo zvekuputira, uye havana kuratidzika kuva vanopiswa.
Pterostilbene mashandiro ekuita; Anti-Kenza Mhedzisiro
Zvinoshamisa kuti, kunyangwe kuderedza ER (endoplasmic reticulum) kusagadzikana kwemitsipa yeropa, Pterostilbene inowedzera kusagadzikana mune endoplasmic reticulum yemasero ekenza yemhuro. Izvo, saka, zvakasarudza zvinokuvadza cancer masero uye zvinodzivirira kubva kune oxidative kusagadzikana mumasero ane hutano.
Mune spinal kana brain cell (glioma) cancer maseru, Pterostilbene inodzika Bcl-2 uye inosimudza Bax; Shanduko idzi dzinowedzera masero e "kuzviuraya" chiratidzo chinoita kuti maseru emuzongoza kana uropi afe.
Cancer masero anoshandisa nzira inozivikanwa seNotch-1, kuzvidzivirira kubva pachiitiko chemotherapy mishonga, kusanganisira oxaliplatin uye fluorouracil. Pterostilbene anovharira Notch-1 signing achigadzira tumors kuti inyanye kunzwa kurapwa kuburikidza chemotherapy.
Pterostilbene inoderedza kugadzirwa kweakawanda emapapu anorapa-inokurudzira mishonga, kusanganisira MUC1, b-catenin, Sox2, NF-κB, uye CD133. Mhedzisiro idzi dzakasanganiswa dzinoderedza kuzvimba uye dzinoita kuti dzisingaite kukura kweanowanikwa cancer
Pterostilbene inokwanisa kunongedza iyo hippocampus mudunhu zvakasarudzika muuropi. Pano, inowedzera CREB (cAMP mhinduro element-inosunga protein), BDNF (uropi-inotorwa neurotrophic factor), uye MAPK (mitogen-activated protein kinases),
Iwo mapuroteni matatu anobatsira maaroni kuwedzera, kukura, uye kupindura zvine hutere kune zvakapoteredzwa. SNRI antidepressants inotarirawo iyi nzira.
Pterostilbene inowedzerawo puroteni inozivikanwa seNrf2 muhippampus, iyo inosimudzira kutaura kwemapuroteni e antioxidant.
Pterostilbene inodzivirira muviri kurwisa chirwere cheAlzheimer nekupa kuchengetedzwa kuuropi kurwisa beta-amyloid (Aβ). Inoita izvi nekubatanidza Akt uye PI3K, mapuroteni maviri anotsigira kukura kweuroni, ndangariro, uye kudzidza.
3. Pterostilbene poda inobatsira
Anokurukurwa pazasi ndiwo matatu anonyanya kukosha pterostilbene poda zvakanaka;
i. Pterostilbene se nootropics
Sezvo patino zera, maitiro matsva emafungiro anova akanyanya kuoma kuumba, uye ndangariro dzinowedzera kuoma. Iko kusakwanisa kuitisa zvakajairika cuffitive mabasa kunoderedzawo. Pterostilbene inowedzera inogona kubatsira mukugadzira iyo yakashandiswazve neural nharaunda chero zera.
Pterostilbene isimba nootropic ine simba, iyo inobatsira mukuzorora kwepfungwa uye kuziva kwekusimbisa. Inotorwawo kazhinji panguva yekushanda isati yatanga nekuda kwekugona kwayo kubatsira mu vasodilation yemidziyo yeropa. Iyo, saka, inopa mhedzisiro yakafanana neiya emamwe nitric oxide anowedzera zvinongedzo.
Pterostilbene nootropic mabhenefiti anotendwa semugumisiro wekukwanisa kwayo kukwidziridza mazinga e dopamine. Mune makonzo, Pterostilbene akaderedza kunetseka uye akawedzera mamiriro. Mukutsvagira kunosanganisira chembere tsvimbo, pterostilbene supplements yakasimudza dopamine mazinga uye yakavandudzwa kuziva. Zvakare, apo iyo Pterostilbene yakaitwa kuti iwanike mumakonzo 'uropi hippocampus, ndangariro yavo yekushanda yakawedzera kusimbiswa.
Mune kumwe kuongorora kunosanganisira makonzo, Pterostilbene zvakare yakasimudzira kukura kwemasero mutsva mu hippocampus. Zvakare, masero emasumbu anotorwa kubva kuhuduku hwemakonzo ehuropi akakura nekukasira paakaratidzwa pachena kuPterostilbene.
Maererano nezvidzidzo zvemasero, pterostilbene powder inovhara MAO-B (monoamine oxidase B) uye inowedzera inowanikwa dopamine muuropi hwedu. Ichi chiito chakafanana nemishonga inobata chirwere cheParkinson, senge rasagiline, safinamide, uye selegiline. Mukutsvaga, Pterostilbene zvakare inochengetedza neurons kubva mukukuvara kwakabatana neAD (chirwere cheAlzheimer's).
Pterostilbene kunetseka kugona kudzora kugona kunofungidzirwawo semhedzisiro yekukwanisa kwayo kuvhara monoamine oxidase B. Mune imwe fundo, Pterostilbene yakaratidza kunetseka nezvekuita panguva mbiri uye imwe mg / kg doses. Ichi chinovhiringidza chiitiko checomputer chakafanana neicho che diazepam pane imwe uye maviri mg / kg muIPM.
ii. Pterostilbene uye kufutisa
Ongororo yakaongorora kugona kwePterostilbene kugadzirisa kufutisa kwakaratidza kuti pane kuwirirana kukuru pakati pterostilbene supplement uye uremu manejimendi. Masayendisiti aya akatenda kuti Pterostilbene poda ine simba rekukanganisa mafuta masasi nekuda kwekugona kwayo kudzikira lipogenesis. Lipogenesis ndiyo nzira yekugadzira yakawedzera masero emafuta. Pterostilbene futi inowedzera kupisa kwemafuta kana mafuta oxidation muchiropa.
Mune kutsvagurudza kunobatanidza vanhu vepakati-kati vane cholesterol yakakwira, boka revatori vechikamu vasiri kutora cholesterol zvinodhaka rakarasikirwa humwe uremu vachitora pterostilbene supplement. Mhedzisiro iyi yakauya yakashamisa kune vaongorori nekuti iyi tsvagiridzo yanga isiri yekuyera iyo pterostilbene supplement seyamuro inorema.
Zvidzidzo zvemhuka nemasero zvinoratidzawo kuti iyo pterostilbene yakakomba inogona kubatsira kuwedzera insulin kunzwa. Zvinoitwa naPterostilbene ndezvekuti inovhara maitiro ekushandura shuga kuita mafuta. Izvo zvakare zvinotadzisa maseru emafuta kubva pakukura uye nekuwanda.
Pterostilbene zvakare inoshandura gut flora composition mudumbu uye inobatsira mukugaya kwechikafu.
Makonzo aakapihwa chikafu nePterostilbene aive nehutano hwakanaka hwegut marora uye inosimudzira huru muAkermansia muciniphila. A. muciniphila rudzi rwebhakitiriya runoratidzika kudzivirira kuzvimba kwakadzika-giredhi, kufutisa, uye chirwere cheshuga. Hutachiona uhwu hwave hwakanakisa hwekutarisisa kwequootic nguva pfupi yadarika.
iii. Pterostilbene Inosimudzira Kurarama Kwakareba
Pterostilbene anti kukwegura bhenefiti yakabatana kune bioactive kemikari inozivikanwa seTrans-pterostilbene. Iyi kemikari yakaratidzwa kuti inoderedza kuzvimba, kudzoreredza kudzikisira kuderera, nekusimbisa shuga yeropa. Mune vivo uye mune vitro zvidzidzo zvinotsigira Pterostilbene kudzivirira uye kurapa maitiro. Iyi kemikari inoshandawo senge caloric inodzora mimetic, inosimudzira muviri kusunungura biochemicals, kusanganisira adiponectin inoderedza maitiro ekukwegura apo ichikurudzira kupora.
Iyi yekudzivirira-kukwegura inowedzera inozivikanwa nekudzivirira kubva kuzvirwere zvinoenderana nezera, nekudaro ichiwedzera hupenyu. Mune makonzo, madosi akadzika eaya makemikari anoderedzwa zviratidzo zvine chekuita nekukwegura. Chidzidzo chacho chakakurudzira kuti kudya zvakawanda zve pterostilbene zvekudya senge mabhuruku kunogona kunonoka zvinetso zvehutano zvine hukweguru, kusanganisira dementia uye cancer.
4. Pterostilbene uye resveratrol
Hapana mubvunzo kuti Pterostilbene uye resveratrol zvakabatana. Resveratrol inozivikanwa zvakanyanya seye bioactive kemikari muwaini tsvuku uye mazambiringa.
Zvakanakira hutano hwe Resveratrol zvakafanana ne izvo zvePterostilbene uye zvinosanganisira kudzivirira kubva kuAlzheimer's, anticancer mhedzisiro, kusimba kwesimba, kurwisa-kupwanya mhedzisiro, kurwisa chirwere cheshuga, uye kubatsira kwemoyo.
Pterostilbene iri chaizvo yemakemikari yakafanana neververatrol, asi zvidzidzo zvakatotaura kuti Pterostilbene inogona kunge iine simba kudarika reveratrol mukutonga kwemamwe mamiriro ehutano. Pterostilbene yakaratidza mikana yakawanda mukuvandudza basa rekuziva, hutano hwemoyo, uye huwandu hweglucose.
Pterostilbene hafu yehupenyu ipfupi pane hafu yehupenyu hweververatrol. Pterostilbene inokwana kana ina inokurumidza kutora kubva kune yekuchera system kuenda mumuviri pane resveratrol. Zvinorehwa, izvi zvinogona kuita kuti Pterostilbene inyatso shande kakawanda pane yekuververatrol. Nekudaro, zvimwe zvidzidzo zvinoda kuitwa kuti uone izvi.
Pterostilbene uye resveratrol zvakare dzimwe nguva zvinosanganiswa kuti zvipe musanganiswa wekuwedzera mune fomu rekapu. Musanganiswa uyu unofungidzirwa kuti une simba zvakanyanya sezvo uchisanganisa mabhenefiti emakomendi maviri aya.
5. Pterostilbene inowedzera
Hapana mubvunzo kuti kuti uwane iyo inonyanya kudikanwa mabhenefiti ePterostilbene, zvinokurudzirwa kuti uzvitore sehupfu hwepoda. Pterostilbene inowedzera vanotengeswa muzvitoro zvakawandisa- zvekudya uye muzvitoro zvepamhepo zvine hunyanzvi mune zvekuwedzera zvekudya. Iwe unogona zvakare kutsvaga pterostilbene vagadziri pamhepo.
Pterostilbene supplement inowanikwa zvakanyanya mumapapu emapapu, ine zvakasiyana-siyana zvemadhidhi. Iwe unofanirwa kuverenga neunyoro kana kuti chinyorwa uye ona huwandu hwePterostilbene mune imwe neimwe kapu usati watenga. Izvi zvakakosha nekuti madhesi akasiyana anogona kuratidza mhedzisiro dzakasiyana.
Zvakare, mamwe pterostilbene supplement dosi inogona kunge yakakwira kupfuura izvo zvakawanikwa muvanhu. Anonyanya kuwanikwa madhesi anobva pakati pe50 mg kusvika 1,000 mg mune yega makapu.
Sezvambotaurwa, kusanganisa mishonga inowanikwawo, nemusanganiswa wakakurumbira kuve Pterostilbene uye resveratrol. Pterostilbene inosanganisirwa zvakare ne curcumin, girini tii, astragalus, uye mamwe masikirwo emasikirwo.
Iwe unogona zvakare kutsvaga sunblock creams iyo ine Pterostilbene kunyange izvi zvisingawanzo. Iyo huwandu hwePterostilbene inodiwa kuti inyatso kukudzivirira pakurwisa cancer haisati yafundwa, asi inogona kupa dziviriro yakawedzerwa.
6. Ndekupi kwekuwana yepamusoro yepamusoro Peterostilbene poda?
Kana iwe uchitsvaga yepamusoro-yemhando yepamusoro pterostilbene poda yekutengesa, ipapo iwe uri panzvimbo chaiyo. Isu tiri vamwe vevakakurumbira, vaneruzivo uye ruzivo vagadziri vepterostilbene muChina. Isu tinopa zvigadzirwa zvakachena uye zvakarongedzwa zvakanaka zvinogara zvichiedzwa nechero repasi-rechitatu-bato marabhoritari kuona kuchena uye kuchengetedzwa. Isu tinogara tichiendesa mairairo kuUS, Europe, Asia, nedzimwe nzvimbo dzepasi. Saka kana iwe uchida kutenga pterostilbene poda yemhando yepamusoro yepamusoro inobvira, ingo taura nesu ikozvino.
Rimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). "Resveratrol, pterostilbene, uye piceatannol mu vaccinium berries". J Agric Chikafu Chem. 52 (15): 4713–9.
Kapetanovic IM, Muzzio M., Huang Z., Thompson TN, McCormick DL Pharmacokinetics, muromo bioavailability, uye metabolic chimiro cheiyo resveratrol uye yayo dimethylether analog, pterostilbene, mumakonzo. Chemother. Pharmacol. 2011; 68: 593-601.
Chengetedzo yezvakagadzirwa trans ‐ resveratrol sechinhu chisvinu chikafu chinotevedzera Mutemo (EC) Kwete 258/97 ″. EFSA Journal. European Chikafu Chengetedza Chiremera, EFSA Panel pane Dietetic Zvigadzirwa, Nutrition uye Allergies. 14 (1): 4368
Becker L, Carré V, Poutaraud A, Merdinoglu D, Chaimbault P (2014). "MALDI misa yakakura imagrometry kufungidzira kwenzvimbo imwecheteyo yeiyo resveratrol, pterostilbene uye viniferins pamashizha emazambiringa". Mamolekyu. 2013 (7): 10587-600.
1.I chii chinonzi Pterostilbene?
3.Pterostilbene powder inobatsira
4.Pterostilbene uye resveratrol
6.Kupi kwekutsvaga iyo yepamusoro yepamusoro Peterostilbene poda?